Iindaba - Yintoni iChain Slings Inspection Guide?(iBanga lama-80 kunye neBakala 100 izilingi zekhonkco elijikelezayo, elineekhonkco eziphambili, izifutshane, iilinki zokuqhagamshela, iihuku zokusawula)
Yintoni iChain Slings Inspection Guide?(iBanga lama-80 kunye neBakala 100 izilingi zekhonkco elijikelezayo, elineekhonkco eziphambili, izifutshane, iilinki zokuqhagamshela, iihuku zokusawula)
Ikhonkco lokuHlola iSilings Guide
(IBakala 80 kunye neBanga le-100 izilingi zekhonkco elijikelezayo, kunye namakhonkco enkosi, amfutshane, amakhonkco okudibanisa, amagwegwe okusawula)
▶ Ngubani ofanele enze uhlolo lwesilingi?
Umntu oqeqeshwe kakuhle kwaye onobuchule uya kuba noxanduva lokuhlola izilingi zamatsheyini.
▶ Kufuneka zihlolwe nini iingoma zamatsheyina?
Zonke izilingi zamatsheyini (ezitsha, ezitshintshiweyo, ezilungisiweyo, okanye ezilungisiweyo) kufuneka zihlolwe ngumntu onobuchule phambi kokuba zisetyenziswe kwindawo yokusebenza ukuze kuqinisekiswe ukuba zakhiwe ngokweenkcukacha (ezifana ne-DIN EN 818-4), azingonakaliswa, kwaye ziya kuphumelela. ulungele umsebenzi wokuphakamisa.Ngeenjongo zokugcina irekhodi luncedo ukuba isilingi ngasinye sekhonkco sinethegi yentsimbi enenombolo yokuzazisa kunye nolwazi lomda womthwalo womsebenzi.Ulwazi malunga nobude betsheyini yesilingi kunye nezinye iimpawu kunye neshedyuli yokuhlola kufuneka ibhalwe kwincwadi yelogi.
Umntu onobuchule kufuneka ahlole izilingi zamatsheyina ngamaxesha athile, kwaye kube kanye ngonyaka.Ukuhlolwa okuphindaphindiweyo kusekelwe kwindlela i-sling chain esetyenziswa ngayo kaninzi, iintlobo zokunyuswa ezenziwayo, iimeko apho isilingi se-chain sisetyenziswa khona, kunye namava adlulileyo kunye nobomi benkonzo ye-slings ye-chain efanayo kunye nokusetyenziswa.Ukuba i-sling chain sling isetyenziswe kwiimeko ezinzima kakhulu, ngoko kufuneka kuhlolwe rhoqo kwiinyanga ezi-3.Uhlolo kufuneka lubhalwe phantsi.
Ukongeza kuhlolo lomntu onobuchule, umsebenzisi kufuneka ahlole izilingi zamatsheyina kunye nezixhobo zokurhweba phambi kokusetyenziswa ngakunye naphambi kokuzibeka kwindawo yokugcina.Khangela iimpazamo ezibonakalayo kwiikhonkco zekhonkco (kubandakanya i-master links), izixhumanisi ezidibanisayo kunye neentambo ze-sling kunye nokuphazamiseka kwezixhobo.
▶ Iingoma zamatsheyina zifanele zihlolwe njani ngexesha lokuhlolwa ngalunye?
• Coca isilingi setyathanga phambi kokuhlolwa.
• Jonga ithegi yokuchonga isilingi.
• Jingisa isilingi setsheyini phezulu okanye wolule isilingi kumgangatho olinganayo kwindawo ekhanyiswe kakuhle.Susa onke amakhonkco amakhonkco ajijekileyo.Ukulinganisa ubude besilingi setsheyini.Lahla ukuba isilingi setsheyini soluliwe.
• Yenza uhlolo lwekhonkco ngekhonkco kwaye ulahle ukuba:
a) Ukunxiba kudlula i-15% yedayamitha yekhonkco.
b) Sika, ucatshulwe, ukrazulwe, utshisiwe, utshiswe, okanye umhlwa ugalelwe.
c) Amakhonkco amakhonkco agqwethiweyo, ajijekileyo okanye agobileyo.
d) Yoluliwe.Ikhonkco leekhonkco livame ukuvala kwaye libe lide.
• Qwalasela i-master link, izikhonkwane zokulayisha kunye neehuku zesilingi ukuba kukho naziphi na iimpazamo ezingentla.I-Sling Hooks kufuneka isuswe kwinkonzo ukuba ivuliwe ngaphezu kwe-15% yokuvula umqala oqhelekileyo, ulinganiswe kwindawo emxinwa, okanye ujijelwe ngaphezu kwe-10 ° ukusuka kwindiza ye-hook engagutywanga.
• Iitshati zezalathiso zabavelisi zibonisa isilingi setsheyini kunye nesakhono sokubetha.Rekhoda umenzi, uhlobo, umda womthwalo womsebenzi kunye nemihla yokuhlolwa.
▶ Iingoma zamatyathanga zifanele zisetyenziswe njani ngokukhuselekileyo?
• Hlala usazi indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo isixhobo, iinkqubo zokusawula phambi kokuba uzame umsebenzi wokuphakamisa.
• Hlola izilingi zamatsheyini kunye nezincedisi phambi kokuba uzisebenzisele naziphi na iziphene.
• Buyisela iintambo zokhuseleko ezaphukileyo zehuku yesilingi.
• Fumana ubunzima bomthwalo phambi kokuwuphakamisa.Musa ukudlula umthwalo olinganiselweyo we-sling chain.
• Jonga ukuba izilingi zamatsheyini zingena ngokukhululekileyo na.Musa ukunyanzela, ihamile okanye izilingi zekhonkco okanye izilingi kwindawo.
• Gcina izandla neminwe phakathi komthwalo kunye netyathanga xa ucinezela izilingi naxa umisa imithwalo.
• Qinisekisa ukuba umthwalo ukhululekile ukuba uphakanyiswe.
• Yenza ukuphakamisa ulingo kunye novavanyo lube sezantsi ukuqinisekisa ukuba umthwalo ulungelelene, uzinzile kwaye ukhuselekile.
• Gcina ulungelelaniso lomthwalo ukunqanda uxinezeleko kwingalo enye yesilingi (umlenze wesilingi) okanye umthwalo ukutyibilika ukhululekile.
• Nciphisa umda womthwalo wokusebenza ukuba impembelelo emandla inokuthi yenzeke.
• Faka iikona ezibukhali ukuze uthintele amakhonkco amakhonkco agobayo nokukhusela umthwalo.
• Misa amahuku okulingi anemilenze emininzi ejonge ngaphandle ukusuka kumthwalo.
• Khupha ummandla.
• Nciphisa umda womthwalo xa usebenzisa isilingi setsheyini kumaqondo obushushu angaphezu kwama-425°C (800°F).
• Gcina izixhobo zesilingi kwiiracks kwiindawo ozinikiweyo kwaye zingalali phantsi.Indawo yokugcina kufuneka yomile, icoceke kwaye ingabi nazingcolisi ezinokuthi zonakalise izilingi zamatsheyini.
▶ Yintoni ofanele uyiphephe xa usebenzisa izilingi zamatsheyina?
• Kuphephe ukulayisha ifuthe: musa ukuwuhluza umthwalo xa uphakamisa okanye uthoba isilingi.Esi senzo sonyusa uxinzelelo lwangempela kwi-sling.
• Musa ukushiya imithwalo emisiweyo ingajongwanga.
• Musa ukurhuqa amatyathanga ngaphaya kwemigangatho okanye uzame ukutsala isilingi esibanjisiweyo phantsi komthwalo.Musa ukusebenzisa isilingi setsheyini ukutsala umthwalo.
• Musa ukusebenzisa izilingi zamatsheyini ezigugileyo okanye ezonakeleyo.
• Musa ukuphakamisa kwindawo yehuku yesilingi (i hook yeclevis okanye eye hook).
• Musa ukulayisha kakhulu okanye ukothusa ukulayisha isilingi setsheyini.
• Musa ukurhintyela izilingi zamatsheyini xa umisa umthwalo.
• Musa ukudibanisa ikhonkco ngokufaka ibholithi phakathi kweekhonkco ezimbini.
• Musa ukwenza mfutshane ikhonkco lesilingi ngamaqhina okanye ngokujija ngaphandle kweclutshi yetsheyini edityanisiweyo.
• Musa ukunyanzela okanye ukusando amagwegwe endaweni yawo.
• Musa ukusebenzisa uqhagamshelo lwasekhaya.Sebenzisa kuphela izincamatheliso eziyilelwe amakhonkco amakhonkco.
• Musa ukuphatha ubushushu okanye amakhonkco e-weld chain: umthamo wokuphakamisa uya kuncitshiswa kakhulu.
• Musa ukuveza amakhonkco ekhonkco kwimichiza ngaphandle kwemvume yomenzi.
• Sukuma emgceni kunye okanye ecaleni komlenze wesilingi ophantsi koxinzelelo.
• Musa ukuma okanye udlule phantsi komthwalo oxhonyiweyo.
• Musa ukukhwela kwisilingi setsheyini.
Ixesha lokuposa: Apr-03-2022